घडीकाे विग्यापनमा सँधै १०:१० किन बजेकाे हुन्छ ? कारण यस्ताे छ
जनता भ्वाइस calendar_today १८ असोज २०७७, 12:57 pm
तपाईंहरुले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ ? घडीको विज्ञापनमा सँधै १०ः१० बजाइएको हुन्छ। प्रायजसो घडीका विज्ञापन हेर्दा घडीको रुपरंग, आकार प्रकार तथा मूल्यमै हाम्रो ध्यान जान्छ ।
शो–रुममा घडी किन्न जाँदा पनि डिस्प्लेमा राखिएका घडीमा कति बजेको छ भन्ने कुरामा ध्यान जाँदैन, त्यो घडीको स्वरुप र मूल्य ट्यागमा ध्यान जान्छ । तर यदि तपाईंले ख्याल गर्नुभएको छ भने यसरी विज्ञापनमा राखिने घडीमा चाहे जति नै बेला किन नहोस् त्यो घडीमा १० बजेर १० मिनेट गएको हुन्छ ।
आखिर विज्ञापनका घडीमा किन १०ः१० बजेको हुन्छ त ? यसको कारण छ । घडीमा दश बजेर दश मिनेट गएको समयमा घन्टा सुई र मिनेट सुईको अवस्था यस्तो ठाउँमा हुन्छ जसले हाँसेको मानिसको मुखाकृति जस्तो देखाउँदछ । चित्रमा बनाइने हाँसेको मुखाकृति जस्तै घडीको सुईले बनाइदिन्छ । सायद हँसिलो स्वरुप देखाउनका लागि पनि विज्ञापनका घडीमा दश बजेर दश मिनेट बनाइएको हुन्छ ।
अर्को कारण हो, विजयको सूचक । दश बजेर दश मिनेट जाँदाको अवस्थामा घन्टा सुई र मिनेट सुई अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ को आकारमा हुन्छ । ‘भी’ को अर्थ भिक्ट्री अर्थात विजय भन्ने हुन्छ । सायद सबैभन्दा सर्वेश्रेष्ठ घडी यहीँ हो भन्ने कुरा देखाउनका लागि हुनसक्छ यसो गराइएको । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने घडीभित्र लेखिएको ब्रान्डको नाम तथा लोगो प्रष्ट रुपमा देखाउनका लागि समेत दुवै सुईलाई यसरी माथि राखिएको हुनसक्छ । GNN NEPAL
काठमाडौँबाट रामेछाप हिड्यो लामो दूरीको बिजुली बस
पबजीसहित ११८ मोबाइल एप्स बन्द
२९ पराम्परागत रुपमा म्यानुअल लेखाङ्कन तथा अभिलेखन व्यवस्थापन भइरहेको सन्दर्भमा वास्तविक आय, व्यय र मौज्दातको एकिन गर्न कठिन भई वित्तीय प्रतिवेदन गर्न समेत कठिन भएको अवस्थामा आ.व.०७६/७७ देखि